Ra’iisul Wasaaraha oo maanta ka qeyb galay shir looga hadlayay arrimaha Xuruyatul-qowlka
Ra’iisul Wasaaraha oo maanta ka qeyb galay shir looga hadlayay arrimaha Xuruyatul-qowlka Muqdisho, Khamiis, May 17, 2012----------------Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qeybgalay kulan labo maalmood ka soconayay Xalane kaa oo ay soo qaban qaabiyeen Wasaaradaha Dastuurka iyo Warfaafinta loogana hadlayay Qebyo-Qoraalka Dastuurka ee ku aadan Arrimaha Xuquuqul Insaanka.
Sidoo kale Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil, ayaa isna sharaxaad ka siiyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya kulankii ay la qaateen dhinacyada Bulshadda rayidka ah iyo waliba doodii ay ka yeeshee arrimaha Xuruyatul-qowlka.
“Mudane Ra’iisul Wasaare Waxaan kulankaani u qabaney inaan ka doodno Xuruyatul qowlka iyo Saxaafadda, Waxaan Dastuurkeena cusub ku soo darnay Xuruyatul-qowlka, Waxayna muhiimadiisu aheyd dhowr arrimood oo ay ugu horeyso inaan kaga gudbeyno Kumeel Gaarnimada oo aan dowladd rasmi ah yeelan doono iyo In Saxaafadda loo soo bandhigo sharcigaasi”.
Dhinka kale Ra’iisul Wasaare, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa sheegay in Sharaf weyn ay u tahay inuu maanta kala soo qeyb galo shirka aad kaga hadleyseen arrimaha Xuquuqul Insaanka, Waxaan aad ugu faraxsanahay in labo cisho ay bulshada Rayidka ah gaar ahaan Odoyaasha arrimahaani ku xeel dheer ay si qoto dheer ah uga doodeen si loo hubiyo in Qebyo-Qoraalka Dastuurka qodobadiisa la xiriira Xuquuqul Insaanka ay u noqon lahaayeen kuwa hormarinaya danaha Shacabka Soomaaliyeed iyo Xuquuqdooda lama taabtaanka ah.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu tilmaamay inuu aad uga xunyahay tacdiyadda loo geysanayo Suxufiyiinta oo ay tahay mid aan loo dulqaadan karin.
“Waxaan aad idin kugu bogaadiyanayaa daruufaha adag oo aad ku shaqeyneysaan iyo caqabadaha maalin walba idin ka soo wajahaya kuwa damiir laawayaasha, dowladuna ma ogolaan doonto in dhib loo geysto Suxufiyiinta Soomaaliyeed”.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay ka go’an tahay hormarinta xuruyatul-qowlka sababtoo ah waxaa jirayn heshiis Is-afgarad ah oo ay dowladdu la saxiixatay hay’adda QM u qaabilsan Xuquuqul Insaanka si dowladdu looga taageero dhanka logistic-da iyo in si wada jir ah loogu shaqeeyo Xuquuqul Insaanka, waana mid ku cad Dastuurkeena.